Dhaqanka - Shanghai Shenyong Line Products Co., Ltd
Furaha horumarinta shirkadda casriga ah waa arrin aadanaha. Kaliya isku dhafan khayraadka aadanaha xoog aan raadsan kartaa muddo dheer iyo horumarinta deggan ee shirkadda. Shenyong dadka u hoggaansamaan "dadka u janjeedha" model maamulka, noocyada kala duwan ee talent si ay u bixiyaan madal ballaadhan ee horumarka ah ee shirkadda uu leeyahay faa'iido awood xoog leh.
Falsafada Business: Classics run, ka dadaalka iyo ujeedooyinka mudada dheer!
Orientation Employee - waxaan ixtiraamaan iyo tababar shaqaalaha, ku dhiiri geli in ay ka qayb maamulka shirkada, u siiyaan meel ballaadhan ee ay horumarka, kor horumarinta heer sare oo ay ka fogaadaan qaraabadooda, oo dhiirrigeli dadka dhammaan heerarka u noqon Frank iyo furan.
Ixtiraam-ka Customer macaamiisha mar walba waa xaq, Annagu waxaannu nahay oo dhan ku qanacsan ee martida, iyo in aan ku weydiino maamulayaasha waaxda ee ah in ay si toos ah u wajihi xidhiidhka macaamiisha ah, ay fahmaan baahida macaamiisha ah ee, si fiican u bixiyaan adeeg qiimaha macaamiisha. Waxaan abuuro jawi dhaqameed xoog leh, ha martida dareemayaa diiranaanta guriga.
Ujeedada: in ay bixiyaan adeeg buuxa si users leh daacadnimo iyo xigmad.
Qiimayaasha: Professional sababta oo ah: joogtaynta.